Adeemsi qabsoo keenyaa kallatti isaa jijjiirachuu qaba. -
Adeemsi qabsoo keenyaa kallatti isaa jijjiirachuu qaba.
bilisummaa February 28, 2016	Leave a comment
Kanaafuu adeemsi keenya
1) Dhaadannoo garee dhageessisuu fi garee humna diinaa kallattii hundaan nurraa itti qabaachuu.
2) Daandiilee wantoota salphatti kaafamuu hin dandeenyen cufuu.
3)Hammuma diinni tarkaanfii nurratti fudhachaa adeemun nus tarkaanfii irratti fudhachuuf gareen meeshaa guutuu qabu hiriira irraa fagaatee dhoksaan waraana wayyaanee irratti qophaa’uu.
4) Jala deemtota hojii isaanii irraa deebi’uu didan tarkaanfii dhumaan adabuu.
5) Qabeenya Wayyaane fi jala deemtota isaa barbadeessuu.
6) Hiriira yommuu baanu dheessuu osoo hin taane tokkummaan dhaabbachuu.
7) Sabaa fi sablammoota akkasumas amantii irraa of eeguu.
8) Bifa riphee loltummaatin waraana wayyaanee iddoo hin beekne baadiyyaa fi magaalaa keessa yommuu socho’u tarkaanfii irratti fudhachuu.
Haala salphaa ta’een humna wayyaanee jalaa laamshessuun ni danda’ama.
Waraanni wayyaanee yeroo qabsoon keenya itti cime mootummaa wayyaanee akka ganu shakkiin hin jiru.
Harki caalan sabaa fi sablammoota biroo waan tahaniif jaalala wayyaanef qabaatanii osoo hin taane dirqamaan ummata irratti dhukaasaa jiru.
Guyyaa boruu irraa qabsoon bifa haarawaan ni eegala.
Rabbi dhugaan nu haa galchu.
Previous Saroonni dhufaa jiran!
Next Waamicha Hatattamaa Hawaasa Oromoo Biyya Alaa fi Oromiyaa Keessa Jiraataniif